कैँचीको धार :: ऋषिका निधि भट्टराई :: Setopati
ऋषिका निधि भट्टराई
ऋषिका निधि भट्टराई।
भनिन्छ, मान्छेले आफ्नो बाल्यकालका यादहरु जिवन पर्यन्त नै आफूसँग संघालेर राखेको हुन्छ। म चार वर्षको हुँदा परिवारसँग जापान गएकी थिएँ र १० वर्षको हुँदा नेपाल आएकी हुँ।
मेरो बाल्यकालको ६ वर्षभन्दा बढी समय जापानमा बितेको हुनाले जापान मेरो लागि एकदम नै प्यारो छ। मलाई जापानको धेरै कुराहारु याद आउछन् तर ती मध्ये पनि मैले पढेको जापानी स्कुल, गुरुमा र साथीहरुका यादहरु अलिक बेसी नै आउँछ।
मैले पढेको जापानी स्कुललाई स्मरण गर्नु पर्यो भने मलाई कवि शिरोमणिको 'फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र?' भन्ने पंक्ति याद आउँछ। जापानी स्कुलमा हामीलाई अक्षर सिकाउनुभन्दा पहिला स्वावलम्बी हुन सिकाइन्थ्यो।
उदाहरणको लागि, आफ्नो लुगा आफै लगाउन, आफै चपस्टिक समातेर खाना खान, उपयुक्त अभिवादन गर्न र आफू र आफ्नु वातावरणलाई सफा एवं व्यवस्थित राख्न सिकाईन्थ्यो। त्यसपछि संवेदनशील हुन सिकाइन्थ्यो।
हाम्रो गुरुमाले सधै भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, 'जुन कुरा अरुले आफूलाई गर्दा नराम्रो लाग्छ, त्यो अरुलाई कहिले पनि गर्नु हुन्न। सकेसम्म आफ्नो वचन र कर्मले आरुलाई ठेस् नपुगोस् भनेर होस् गर्नु पर्छ तर कथम् कथाचित आफ्नो कारणले अर्को मान्छेलाई ठेस् पुग्यो भने लाज नमानिकन विनम्र भएर शिर झुकाएर माफी माग्नु पर्छ।'
हामीलाई बिनम्र वचन, संवेदनशीलता र दयाको भावना नै जीवन यापन गर्नको लागि चाहिने अपरिहार्य हतियार हो भनेर सिकाइन्थ्यो। त्यसबेला म ५ वर्षकी थिएँ। एक दिन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्सको कक्षा भइरहँदा मेरो एकजना सहपाठीले मलाई 'ऋषिका हेरन, मैले मेरो कैँची ल्याउन बिर्सेछु। मलाई तिम्रो कैँची एकछिन प्रयोग गर्न देउन ल?' भनेर सोधिन्।
मैले पनि 'हुन्छ' भनेर दिएँ। हुनलाई त यो एकदम सामान्य क्रियाकलाप थियो तर मेरी गुरुमाले मलाई ध्यान दिएर हेरिरहनु भएको रहेछ। मैले कैची दिएपछि उहाँले मलाई बोलाएर 'ऋषिका तिमीले कैँची दिएको तरिका भएन नि' भन्नु भयो। म त एकछिन अक्क न बक्क भएँ।
त्यसपछि गुरुमाले मुसुक्क मुस्कुराएर 'कुनै पनि धारिलो कुरा जस्तै कि कैँची, छुरी, बिर्को नलागेको कलम अथवा चुच्चो पेन्सिल अरुलाई दिँदा सधैँ धारिलो भाग चै आफुले पक्डेर, समाउने भाग लिने मान्छे तिर फर्काएर दिनु पर्छ। त्यसो गर्दा लिने मान्छेलाई चोट लाग्ने सम्भावना शून्य हुन्छ। अबदेखि होस् गर है?' भनेर भन्नु भयो।
त्यसबेला गुरुमाले सिकाउनु भएको पाठको गहनता ५ वर्षको मानसपटलले कति बुझ्यो होला भनेर म अन्दाज लगाउन सक्दिनँ। तर अहिले आएर म के कुरा भन्न सक्छु भने कैँचीको धारको दिशा प्रति अनभिज्ञ रहनु भनेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई निम्त्याउनु सरह हो। यसले समाजका विभिन्न आयामहरुलाई प्रभाव पार्ने छ।
हाम्रो देशमा कैँची सोज्याउने औपचारिक शिक्षा न त स्कुलमा दिइन्छ न त घरमा। यही लकडाउनको बेला मेरो एकजना बहिनीसँग भिडियो च्याट भयो। तिनले निकै चिन्तित भएर मलाई 'दिदी, हेर्नु न मेरो अनुहारभरी नै पिम्पल आयो। सबैले के हो त्यो? के सारो अनुहार बिगारेको?' भन्छन्। मैले कहाँ जानी-जानी मेरो अनुहार बिगारेको हो त? मेरो त मनोबल नै कमजोर भईसक्यो। यो लकडाउन खुलेपछि म कसरी बाहिर निस्किने होला?' भनेर भनिन्।
मैले तिनलाई खासै केही भन्न सकिनँ तर बुद्धिले भ्याएसम्म थामथाम थुमथुम पारेँ। तिनको कुरा मैले अनुभूति गर्न सक्छु किनभने मेरो पनि किशोर अवस्थामा अनुहारभरी नै पिम्पल आएको थियो र वरिपरिको मान्छेले ''के हो त्यो?' 'के सारो अनुहार बिगारेको?' नै भनेका थिए। मलाई पनि घर बाहिर जान गाह्रो लाग्थ्यो।
मलाई बहिनीको कुराले निकै नै सोच मग्न बनायो। यी बाहिनी बाहेक अरुलाई कस्तो कुराले पिरोलेको छ होला र हाम्रो समाजमा असंवेदनशीलताले कस्तो रुपमा निरन्तरता पाइरहेको छ होला भनेर बुझ्न मन लाग्यो। त्यसैले मैले मेरो केही घनिष्ठ साथीभाइहरुलाई सम्पर्क गरेर 'तिमीलाई अर्को मान्छेले के भन्यो भने साह्रै असंवेदनशील लाग्छ?' भनेर सोधेँ। उनीहरुले दिएको उत्तर तल प्रस्तुत गरेकी छु।
साथी १: मलाई मेरो वजनको बारेमा टिप्पणी दिएको मन पर्दैन। हो, म मोटी छु तर जति बेला पनि मेरो वजनलाई मेरो अस्तित्व बनाएको मन पर्दैन।
साथी २: मलाई उमेर सोधेकोमा खासै नराम्रो लाग्दैन। तर उमेर थाहा पाएपछि 'तिमी त उमेरभन्दा बुढी देखिदो रैछौ' भनेको मन पर्दैन।
साथी ३: मेरो एकजना ठूलोममी हुनुहुन्छ। जब-जब म उहाँको घर जान्छु, उहाँ मेरो नजिक आएर मेरो अनुहार नियाल्नु हुन्छ अनि 'तिम्रो त कति धेरै चाउरी आएछ' भन्नु हुन्छ। मलाई एकदम नरमाइलो लाग्छ।
साथी ४: मेरो विवाह भएको छैन अनि यही कुरालाई लिएर अरु मान्छेहरुले मेरो आमा-बुवालाई 'अझै विवाहको टुंगो लागेन? अब त ढिलो हुन्छ त' भनेर अत्याएको मन पर्दैन।
साथी ५: मलाई आफ्नो व्यक्तिगत त्यस्तो अनुभव त झट्ट याद आएन। तर पत्रकारहरुले भर्खर विवाह भएको नायिकाले पैसाको लागि विवाह गरिन् कि प्रेमको लागि विवाह गरिन् भन्ने विषयमा लेखिएको आक्रमणयुक्त लेख साह्रै असंवेदनशील लाग्यो।
संवेदनशीलता अत्यन्तै गम्भीर अवधारणा हो। संवेदनशील हुनको लागि कुनै संक्षिप्त तरिका हुँदैन। किनभने संवेदनशीलता कठोर परिश्रम र दृढ अभ्यासबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। हाम्रो समाजमा विराजमान असंवेदनशीलताको मुल जड भनेको अज्ञानता हो। हामीलाई औपचारिक या अनौपचारिक माध्यमबाट संवेदनशीलताको विषयमा ज्ञान दिइएको छैन।
कसरी नसोचिकन उच्चारण गरेको शब्दले एउटा मान्छेको मनोबललाई प्रभाव पार्छ भनेर सिकाइएको छैन। हामीलाई 'जुन कुरा अरुले आफूलाई गर्दा नराम्रो लाग्छ, त्यो अरुलाई कहिले पनि गर्नु हुन्न’ भनेर सिकाइएको छैन। हामीलाई विनम्र वचन, संवेदनशीलता र दयाको भावना नै जीवनयापन गर्नको लागि चाहिने अपरिहार्य हतियार हो भनेर सिकाइएको छैन। अरुलाई कैँची दिँदा धार आफूले पकड्नु पर्छ भनेर सिकाइएको छैन।
मानव जाति सधैँ खुसीको खोजीमा तत्पर रहन्छ। तर अहिले संसार नै अनिश्चितता तर्फ़ लम्किरहेको बेला खुसी खोज्न त परै जाओस्, भविष्य प्रति आशावादी हुन पनि सजिलो भैरहेको छैन। मेरो हजुरबुवाले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो 'दिनुमा भन्दा ठूलो सुख केहीमा पनि हुँदैन।'
कोरोनाले ग्रसित पारेको यो संकटको घडीमा एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपहार भनेको मन, वचन र कर्मले समर्पित संवेदना हो। व्यक्तिगत आलोचनामा अल्मलिनुभन्दा बरु आफू र आफ्नो परिवारको कैँचीको धार कता तिर छ भनेर अवलोकन गरेमा त्यो आफैमा कोरोनाले निम्त्याएको समस्याहरुलाई पराजय गर्ने औजार हुनेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २३, २०७७, १३:०६:००
विपद व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको भूमिका